Nhau - Maitiro Ekuisa Kuyerera Kweyero yePeristaltic Pombi?
Maitiro ekuseta Kuyerera Kweyero yePeristaltic Pombi?
1. Mubvunzo maererano nekuyerera parameter tafura
Zvinoenderana nemusoro wepombi neRudzi rwepombi, bvunza 《Hose flow parameter table》yeLeadfluid kuti uwane spidhi inoenderana nekuyerera kwakananga kana tarisa kuyerera kwehozi pabhindauko, zvichienderana neformula yecalculation formula, verenga kumhanya kunoenderana ne inodiwa kuyerera, wobva wagadzirisa kumhanya uye uwane kuyerera kunoenderana.
Iyo nzira inogona kuseta kumhanya uye kuyerera zvakaringana, nyore kushanda, inowanzoshandiswa mukumhanyisa-inodzorwa peristaltic pombi.
2. Verenga hukama hunoenderana pakati pekumhanya nekuyerera
Kuseta chero kumhanya n1, kuyera imwe nguva t1, chaiyo vhoriyamu yemvura inounzwa Q1.
Zvinoenderana nea=Q1/n1 kuverenga kuyerera kwekofi uye zvinoenderana neformula n2=Q2/a
kuverenga kunodiwa kutenderera kumhanya n2, gadzirisa kumhanya kuti uwane inodiwa kuyerera L1.
Iyi nzira inogona kuwana yakanyatso kuyerera kuyerera, asi kushanda kwakaoma, kwakakodzera kumhanyisa-inogadzirisa pombi inoda kuyerera kwakanyanya uye kuwanda kwehuwandu, kana mamiriro ekunze achichinja kana kushanda kwenguva yakareba, inoda kuita kuyerera kururamisa nenguva, kuitira kuchengetedza kuyerera kwakanyanya.
3. Input flow parameters zvakananga
Leadfuld yakangwara kuyerera mhando uye kugovera mhando peristaltic pombi inotora yakakwirira-tsanangudzo LCD kuratidza uye kushanda, ingosarudza musoro wepombi uye pombi chubhu modhi kutanga, uye ipapo Input kuyerera paramita zvakananga.
Iyi nzira inogona kuwana yakanyatso kuyerera kuyerera, ingotevera zvinokurudzira, zviri nyore kushandisa, dhigirii rehungwaru.Kana mamiriro ekunze achichinja kana kushanda kwenguva yakareba, inoda kururamisa kuyerera munguva, kuitira kuchengetedza kuyerera kwakanyanya.Pombi uye kuyerera sensor inoumba yakavharwa loop system, izere otomatiki chaiyo-nguva yekuyerera kururamisa, ziva kwenguva yakareba yakagadzikana kutapurirana.